Soo saaraha budada ugu fiican ee Palmitoylethanolamide
Cofttek waa soosaaraha ugu wanaagsan ee Palmitoylethanolamide (PEA) ee Shiinaha. Warshadeena waxay leedahay nidaam maareyn wax soo saar oo dhameystiran (ISO9001 & ISO14001), oo leh awood wax soo saar bille ah oo ah 3200kg.
Fiidiyowga budada Palmitoylethanolamide
Budada Palmitoylethanolamide (PEA) Smamnuucista
xagiisayna 98% budada loo yaqaan 'PEA' ； 98% budada
Qaaciddada Molecular: C18H37NO2
Miisaanka kelli: 299.49 g / mol
Dhibcaha Biyaha: 93 ilaa 98 ° C
Magaca kiimikada: Hydroxyethylpalmitamide Palmidrol N-Palmitoylethanolamine Palmitylethanolamide
micne ah: Palmitoylethanolamide
Furaha gudaha: HXYVTAGFYLMHSO-UHFFFAOYSA-N
Kala badh: saacadood 8
Codsiga: Palmitoylethanolamide (PEA) waxay ka tirsan tahay qoyska endocannabinoid, waa koox amids acid fat. PEA waxaa la caddeeyey inay leedahay falanqeeye ficil-celin iyo anti-bararka waxaana loo adeegsaday dhowr daraasadood oo la xakameeyay oo diiradda lagu saaray maaraynta xannuunka dabadheer ee bukaannada qaangaarka ah ee leh xaalado caafimaad oo kala duwan.
Palmitoylethanolamide (544-31-0) Spectrum NMR
Palmitoylethanolamide waa aashitada asiidhka dufanka leh ee loo yaqaan 'endogenic fatty acid' kaas oo hoos yimaada fasalka Agonists Factor Agonists. Waxay si dabiici ah ugu dhacdaa cuntooyinka ay ka mid yihiin soybean, lawska lecithin, iyo jirka aadanaha.
Palmitoylethanolamide waxaa markii ugu horreysay la helay horraantii 1940 -meeyadii. Saynisyahannadu waxay markii ugu horraysay ogaadeen in isticmaalka ukunta budada ah ee budada ah ay kor u qaadayso jawaab -celin caafimaad oo caafimaad leh oo carruurta ah waxayna hoos u dhigtay halista ah inuu ku dhaco qandho roomaati ah. Cilmi -baaris dheeraad ah ayaa lagu soo gabagabeeyay in jaallo -beedka ay ku jiraan isku -dhafan gaar ah, PEA. PEA ayaa sidoo kale laga helay cuntooyinka oo dhan sida lawska iyo soybean, kuwaas oo gacan ka geysta bixinta difaac xoog leh iyo faa'iidooyin caafimaad.
Ka sokow in laga helo cuntooyinka qaarkood, PEA sidoo kale si dabiici ah ayay ugu dhacdaa jirkeena. Kiimikada waxaa jidhkeenna ka soo saara unugyo badan oo qayb ka ah jawaab -celinta difaaca caafimaad qabta. PEA waxaa si gaar ah u sameeya jidhkeenu isagoo ka jawaabaya caabuq. Waxaa la og yahay in la maareeyo xanuunka aan ku hayno jirka iyada oo laga ilaalinayo hab -dhiska difaacayaga in si xad -dhaaf ah wax looga qabto waxayna kor u qaadaa difaaca jirka iyo falcelinta bararka ee jirka.
Budada Palmitoylethanolamide waxaa inta badan loo isticmaalaa daawo xanuun, fibromyalgia, neuropathic pain, sclerosis multiple, carpal tunnel syndrome, iyo xaalado kale oo badan.
Palmitoylethanolamide iyo Qoyska Cannabinoid
Palmitoylethanolamide qasab kuma aha xashiishadda laakiin waxaa loo tixgelin karaa inay ka mid tahay qoyska cannabinoid. PEA waxay u shaqaysaa si la mid ah CBD (cannabidiol), oo ah mid ka mid ah xeryaha ugu waaweyn ee xashiishadda laakiin ma laha saamayn nafsaani ah. Badeecadaha CBD aad bay caan u yihiin maalmahan waxaana laga heli karaa ku dhawaad ​​wax walba laga bilaabo saliida ilaa kareemada, iyo alaabada cuntada. Alaabada CBD ayaa sidoo kale loo adeegsadaa faa'iidooyin caafimaad oo badan oo suurtagal ah, oo ay ku jiraan maskaxda, dareemayaasha, iyo caafimaadka wadajirka ah.
PEA sidoo kale waa cannabinoid, laakiin waxaa loo falanqeeyaa sida dhammaadcannabinoid sida loogu sameeyo gudaha jirka Si kastaba ha ahaatee, way ka duwan tahay cannabidiol iyo tetrahydrocannabinol maadaama jidhku aanu si dabiici ah u samayn kiimikooyinkan.
Palmitoylethanolamide wuxuu kiciyaa dufanka gubanaya, tamar-kordhinta, iyo alfa-ka-hortagga bararka PPAR. Marka borotiinadan muhiimka ah la dhaqaajiyo, PEA waxay joojisaa ficilka hidda -wadayaasha awooda inay kor u qaadaan bararka waxayna yareeyaan soo -saarka dhowr walxood oo barara. PEA waxay kaloo yareysaa waxqabadka hiddo -wadaha FAAH ee jaba dabiiciga cannabinoid anandamide wuxuuna sare u qaadaa heerarka anandamide ee jirka. Anandamide ayaa mas'uul ka ah yareynta xanuunkaaga, dejinta maskaxdaada, iyo kor u qaadida nasashada jirkaaga.
PEA waxaa sidoo kale lagu yaqaanaa inay ku xirto unugyada jirka waxayna yareysaa xanuunka iyo bararka. Waxay ku jirtaa qaab -dhismeedka palmitic acid, kaas oo ka caawiya jirka inuu ku sameeyo Palmitoylethanolamide jirka.
Sida laga soo xigtay saynisyahannada qaarkood, si fudud u kordhinta qaadashada palmitic acid ma saameyn doonto wax soo saarka PEA. Tani waa sababta oo ah jirkaagu wuxuu u isticmaali doonaa PEA jirkaaga kaliya marka uu u baahan yahay inuu bogsiiyo bararkaaga ama xanuunkaaga. Tani waxay keentaa heerarka PEA ee jirka sida caadiga ah way kala duwan yihiin maalintii oo dhan.
Habka ugu fiican ee lagu heli karo faa'iidooyinka PEA waa in la cuno cuntooyinka hodanka ku ah PEA ama kaabisyada caadiga ah.
Faa'iidooyinka iyo codsiyada budada Palmitoylethanolamide
PEA waxaa la caddeeyay inay leedahay xannuun-yareyn iyo astaamo ka-hortagga bararka waxaana loo adeegsaday maaraynta xanuunka daba-dheeraada ee dadka waaweyn oo leh xaalado caafimaad oo hoose oo badan. Tusaale ahaan, waxay ku siin kartaa saamayn waxtar leh sida adjuvant si loogu daaweeyo xanuunka dhabarka hoose ee bukaanada waayeelka ah ama kaligeed ayaa loo isticmaali karaa maareynta xanuunka dabadheeraad ah ee bukaannada aadka u xanuunsan meel ka -qaadista xanuun -dhaqameedka kuwaas oo halis weyn u leh waxyeellooyin xun.
Natiijooyin rajo leh ayaa lagu muujiyey daweynta radikulopathies aan qalliinka ahayn oo leh qaab-dhismeed aad u micronized ee PEA iyo daaweynta isku-darka leh alfa-lipoic acid si loo yareeyo cudurka prostatitis-ka/xanuunka miskaha ee joogtada ah.
Hoos waxaa ku yaal faa'iidooyin waaweyn oo PEA ah:
· Xanuunka Aafada
Waxaa jira waxoogaa caddayn ah oo xaqiijinaya awoodda PEA ee yaraynta xanuunka daran. PEA waxaa lagu baaray in ka badan 6 kun oo qof iyo 30 tijaabo caafimaad tan iyo 1070 -meeyadii. Si kastaba ha noqotee, daraasaddu waxay inta badan ku guuldareysatay inay kala soocdo xanuunka neuropathic iyo non-neuropathic. The faa'iidooyinka Palmitoylethanolamide ee xanuunka neuropathic ma yara cad sababtoo ah xog ku filan oo ku filan ilaa maanta.
Xaddidaad kale ayaa ahayd in inta badan daraasaddan aysan lahayn xakamaynta placebo iyo cilmi baaris tayo sare leh ayaa loo baahan yahay si loo go'aamiyo waxtarka PEA ee yaraynta noocyada kala duwan ee xanuunka.
Sahan lagu sameeyay 12 daraasadood oo bini -aadam ah, kaabayaasha PEA waxay muujiyeen wax -ku -oolnimada yaraynta awoodda xanuunka dabadheeraad ah iyo neuropathic iyada oo aan lahayn waxyeello daran. Dadkaas 12ka ah ayaa sida caadiga ah la siiyay kaabayaasha PEA oo leh qiyaaso u dhexeeya 200 ilaa 1200 mg/maalin muddo ka badan 3 illaa 8 toddobaad. Kaabistu waxay qaadatay qiyaastii laba toddobaad si loo gaaro xaaladda xanuunka yareeya. Qaadashadeeda muddo dheer ayaa nafaqaynaysa saamaynteeda iyada oo aan keenin wax saamayn xun ah.
Daraasad kale oo lagu sameeyay 300 ama 600 mg/maalintii PEA waxay muujisay hoos u dhac xoog leh oo ku dhaca xanuunka sciatica ee tijaabada muhiimka ah ee in ka badan 600 oo qof. PEA waxay hoos u dhigtay xanuunka in ka badan 50% 3 toddobaad gudahood, taas oo inta badan aan laga helin dawooyinka xanuunka badan.
· Caafimaadka maskaxda iyo dib u soo nooleynta
PEA ayaa sidoo kale loo yaqaan inay faa'iido u leedahay cudurrada neerfayaasha iyo istaroogga. Kaabista ayaa loo arkaa inay hagaajiso shaqada maskaxda iyadoo ka caawineysa unugyada maskaxda inay noolaadaan oo yareeyaan caabuqa.
Daraasad lagu sameeyay 250 bukaan oo istaroog ah, qaabaynta PEA oo leh luteolin waxay muujisay calaamado soo kabasho oo soo hagaagtay. Waxaa sidoo kale lagu dhawaaqay inay saameyn waxtar leh ku leedahay caafimaadka maskaxda wanaagsan, xirfadaha garashada, iyo shaqeynta maskaxda maalin kasta. Saameyntu waxay ahayd mid la dareemi karo ka dib 30 maalmood oo kaabis ah iyo markii ka dib laba bilood oo kaabis ah, horumar badan ayaa la ogaaday.
Luteolin iyo keli ahaan, PEA ayaa loo arkay inay ka hortagto cudurka Parkinson ee jiirarka marka loo isticmaalo luteolin. Waxay yareysaa dhaawaca maskaxda iyadoo ilaalineysa dareemayaasha dopamine. Si kastaba ha ahaatee, daraasado caafimaad oo caadi ah ayaa loo baahan yahay si loo xaqiijiyo natiijooyinkan.
Daraasad kale ayaa muujisay in PEA oo leh luteolin ay gacan ka geysatay kor u qaadista waxyaabaha neerfaha sida BDNF & NGF kuwaas oo ah borotiinno awood yar oo waxtar leh si loo abuuro unugyada maskaxda cusub. Waxay kor u qaadday kartida maskaxda ee dib -u -soo -nooleynta unugyada iyo unugyada cusub ka dib markii ay dhibaato ka soo gaartey laf -dhabarka ama maskaxda. Markii PEA oo ay weheliso luteolin loo adeegsaday jiirarka waxay kor u qaadday bogsashada dareemayaasha jiirarka qaba dhaawacyada laf -dhabarka.
Sababtoo ah dhacdada dabiiciga ah ee cannabinoids ee PEA, saameyntu waxay muujisay kor u qaadida dabeecadaha bukaanka, niyadda. Waxay muujisay halista suuxdinta ee jiirarka. Si kastaba ha ahaatee, saamaynta ay ku leedahay qallalka weli lama baarin bini'aadamka waxaana loo baahan yahay daraasado dheeraad ah si loo xaqiijiyo tan.
· Saameynta Wadnaha
Wadno -qabadku wuxuu dhacaa iyada oo ay sabab u tahay xannibaadda xididdada dhiigga ee u jeeda wadnaha. PEA waxaa loo yaqaanaa inay ka soo kabato dhaawaca unugyada wadnaha waxayna kordhisaa socodka dhiigga ee wadnaha kaas oo gacan ka geysanaya yaraynta kiisaska wadne -istaagga. Daraasad lagu sameeyay jiirarka ayaa sidoo kale muujisay hoos u dhigidda heerarka cytokine bararka ee wadnaha.
Isticmaalka PEA ayaa sidoo kale hoos u dhigay heerka cadaadiska dhiigga ee jiirka oo ka hortagay dhaawaca kelyaha iyadoo la yareeyo walxaha bararka. Marka la yareeyo xididdada dhiigga, PEA waxay wax ku ool u ahayd inay xannibaan enzymes -ka iyo soo -dhoweeyeyaasha kordhiya cadaadiska dhiigga.
· Calaamadaha murugada
Daraasad dhowaan la sameeyay, 58 qof oo qaba niyad -jabka ayaa lagu daweeyay PEA. Qiyaasta 1.2 gm maalintii ayaa la siinayay bukaannada muddo ka badan 6 toddobaad. Tani waxay dhalisay horumar degdeg ah oo niyadda iyo astaamaha guud. PEA marka lagu daro daawooyinka lidka diiqadda sida citalopram, waxay hoos u dhigtay astaamaha niyad -jabka 50%.
· Astaamaha hargabka caadiga ah
Daraasad kale ayaa muujisay in PEA ay tahay dawo wax ku ool ah oo lagula dagaallamo fayraska hargabka oo sababa hargabka caadiga ah. Qaar ka mid ah sahannadii hore ee in ka badan 4 kun oo qof, PEA waxay awood u yeelatay inay muujiso saamayn togan ee difaaca waxayna gacan ka geysatay yareynta astaamaha hargabka ee bukaannada.
Daraasad kale, 900 oo askar dhallinyaro ah ayaa la siiyay qiyaastii 1,200 mg oo PEA ah taas oo yaraysay muddadii hargabka iyo bogsashada calaamadaha sida dhuun xanuun, san duuf, qandho, iyo madax xanuun.
Ugu dambayntii laakiin ugu yaraan PEA ayaa si guul leh loogu isticmaalay in lagu soo nooleeyo calaamadaha cudurka mindhicirka bararka (IBS) ee xayawaanka. Kaabisyada PEA marka lagu tijaabiyo jiirka oo leh barar xiidmeed oo joogto ah, waxay gacan ka geysatay caadiyeynta saxarada waxayna si wax ku ool ah uga hortagtay waxyeellada dahaarka mindhicirka.
Waxyeellada mindhicirka ama bararka waxaa sababa colitis boog taasoo keeni karta halista kansarka. Isticmaalka PEA wuxuu ka joojiyay nudaha mindhicirka caadiga ah inuu kor u qaado kansarka ku badan jiirarka. PEA waxay yareysaa cytokines -ka bararka iyo koritaanka neutrophils iyo unugyada difaaca oo xoojiya astaamaha dhaawaca mindhicirka.
Ilaha cuntada ee Palmitoylethanolamide
In kasta oo PEA ay tahay asiidh dufan leh, oo ay ku jiraan dufan badan oo ku jira cuntadaada ayaa waxyeello ka badan tan wanaagsan keeni doonta. Isticmaalka cuntooyinka ku badan dufanka buuxa ma kordhin doonto wax soo saarka jirkaaga ee PEA bedelkeeda waxay kordhin doontaa halista ah inaad yeelato cudurro kala duwan oo dabadheeraad ah.
Cuntooyinka sida wax soo saarka soy, soy lecithin, lawska, iyo alfalfa waa qaar ka mid ah ilaha waaweyn ee PEA. Dadka qaba xasaasiyadda lowska waa inay iska dhaafaan lawska oo ay cunaan cuntooyin kale. Ukunta ukunta ayaa ah il kale oo wanaagsan waxaana cuni kara dadka aan dareen u lahayn ukunta. Macaamiisha ayaa sidoo kale tixgelin kara qaadashada kaabayaasha PEA maadaama ay yihiin badbaado iyo doorasho wax ku ool ah.
PEA waxay ku kordhisaa qiyaasta & badbaadada
Sida laga soo xigtay daraasadaha kiliinikada, ugu yaraan 600 mg/maalin ayaa laga yaabaa in loo baahdo si loo yareeyo xanuunka dareemayaasha, iyo qiyaasaha 1.2 g/maalin ayaa loo isticmaali karaa in lagu daaweeyo xanuunka dareemayaasha macaanka.
Bukaannada sonkorowga qaba ee qaba dhibaatooyinka indhaha, qiyaaso ilaa 1.8 g/maalin ah ayaa wax ku ool u ahaa yareynta dhaawaca dareemayaasha indhaha.
Daaweynta hargabka caadiga ah, 1.2 g/maalin oo ah PEA ayaa ahayd qiyaasta caadiga ah.
La hadal dhakhtarkaaga ka hor intaadan qaadan kaabayaasha PEA maadaama PEA aysan ansixin FDA si ay u qaadato qiyaaso badan.
Isticmaalka budada Palmitoylethanolamide ama kaabisyo yar yar, xaddiyo xaddidan ayaa guud ahaan loo tixgeliyaa ammaan. Si kastaba ha ahaatee, daraasado caafimaad oo horumarsan ayaa looga baahan yahay qiyaaso sare. Kaalmada dheeraadka ah ee PEA ayaa sidoo kale loo yaqaanaa inay badbaado tahay marka loo eego qaar ka mid ah daraasadaha yar-yar.
Soo -saareyaasha qaarkood oo ka socda warshadda soo -saaraha PEA waxay ku talinayaan in wadarta qiyaasta loo qaybiyo laba qaybood oo la cuno maalintii. Xaaladaha qaarkood, PEA micronized, oo ereyo fudud ku ah budada palmitoylethanolamide, ayaa la og yahay inay si fiican u nuugto jirka oo saynisyahannadu waxay u tixgeliyaan qaabka budada inuu ka sarreeyo qaabab kale.
Isticmaalka afka ee palmitoylethanolamide guud ahaan waxaa loo tixgeliyaa badbaado inta badan dadka waaweyn marka la isticmaalo ilaa 3 bilood. Illaa iyo hadda, ma jiraan dhibaatooyin daran ama is-dhexgalka daroogada-daroogada. Si kastaba ha ahaatee, ma jiraan macluumaad ku filan oo sheegaya in dawadu badbaado yeelan karto marka la isticmaalo in ka badan saddex bilood. Dhibaatooyinka soo raaca waxaa ka mid noqon kara calool kacsan, oo aad dhif u ah.
Si loo caddeeyo, PEA ma keenin wax dhibaato ah oo halis ah mid kasta oo ka mid ah daraasadaha kor ku xusan laakiin weli ma lahan daraasado ammaan oo habboon. Sidoo kale, waxaa jira caddayn aan ku filnayn si loo ogaado xaddiga waxtarka PEA ee bukaannada qaba noocyada xanuunkaan.
Uurka iyo carruurta
PEA guud ahaan waxaa loo tixgeliyaa inay ammaan u tahay isticmaalka dadka waaweyn iyo dhowr daraasadood ayaa sidoo kale muujiyay in yar oo aan lahayn wax khatar ah carruurta. Laakiin daraasado waaweyn ayaa u baahan doona si loo xaqiijiyo ammaanka PEA ee carruurta. Sababtoo ah la'aanta xog caafimaad oo ku filan, haweenka uurka leh iyo naas -nuujinta ayaa lagu talinayaa inay raacaan taxaddar oo ay la tashadaan dhakhtar ka hor inta aysan qaadan wax kaabis ah oo PEA ah.
PEA waxay hoos u dhigtay dhowr saamayn xun iyo xanuun iyadoo hagaajinaysa tayada nolosha. Daraasaddeedu waxay taageertaa badbaadada iyo hufnaanta aashitada dufanka leh waxaana lagula talinayaa inay ku badbaado isticmaalka caafimaad ee PEA. Kaabistu waxay wax ku ool u tahay xanuunnada isku -buuqa oo ay ku jiraan cilladda tunnel -ka carpal iyo xanuunka nafsadda. Kordhinta PEA sidoo kale waa sahlan tahay in la qaato waxaana lagu maamuli karaa afka.
Xusuusnow inaad la tashato takhtar ka hor intaadan qaadan wax kaabayaal PEA ah maadaama qiyaasta sare ee PEA ay keeni karto dhibaatooyin. Inkasta oo dhibaatooyinku ay yihiin kuwo khafiif ah oo aan halis ahayn, PEA waa in aan loo isticmaalin beddelka daaweynta caafimaad ee la oggolaaday. Si kastaba ha noqotee, faa'iidooyinka iyo daraasadaha aan kor ku soo sheegnay waxaa lagu sameeyay inta badan xayawaanka iyo unugyada. Caddaynta caafimaad ee deggan ayaa weli maqan.
Daraasado badan oo bini -aadamka ah ayaa looga baahan yahay si loo go'aamiyo saamaynta PEA ku leedahay caafimaadka mindhicirka, wadnaha, iyo sii -deynta histamine.
Budada Palmitoylethanolamide (PEA) ee iibka & Meesha laga iibsado Palmitoylethanolamide (PEA) budada
Waxaan nahay khabiir Palmitoylethanolamide (PEA) iibiyaha budada dhowr sano, waxaan siineynaa badeecado leh qiime tartan, iyo badeecaddeenu waa midda ugu tayada sareysa waxaynana maraysa baaritaan adag, madax-bannaan si loo hubiyo inay aamin u tahay isticmaalka adduunka oo dhan.
Hansen HS. Palmitoylethanolamide iyo koronto-yarayaasha kale ee anandamide. Kaalinta la soo jeediyay ee maskaxda jiran. Exp Neurol. 2010; 224 (1): 48-55
Petrosino S, Iuvone T, Di Marzo V. N-palmitoyl-ethanolamine: bayoolajiga iyo fursadaha daweynta cusub. Biyoolaadiga. 2010; 92 (6): 724-7
Cerrato S, Brazis P, della Valle MF, Miolo A, Puigdemont A. Saamaynta cudurka 'palmitoylethanolamide' ee tallaalidda jirka ee loo yaqaan 'histamine', PGD2 iyo TNFα oo laga sii daayo unugyada maqaarka maqaarka. Vet Immunol Immunopathol. 2010; 133 (1): 9-15